Booliska Ingiriiska oo si cajiib ah u tijaabinaya aragga wadeyaasha baabuurta - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, TVP
Darawaliinta markii ay booliska istaajiyaan ku guul darreysta iney lambarka taarikada gaariga ka akhriyaan masaafe dhan 20m (65ft), waxaa lagala noqon doonaa shatiga u fasaxaya iney gaadiidka kaxeeyaan.
"xagjiriin ka macaashay gargaarka UK"
Ilmo saddex qof laga samaynayo ayay ogolaatay UK
Sgt Rob Heard oo wakiil ka ah laamaha booliska ee howlgalkaan billaabaya ayaa yiri: "Haddii uusan qofku awood u lahayn inuu arko calaamad digniin ah oo uu gaari shitay ama uusan si deg deg ah uga istaagi karin khatarta waxay taasi sababeysaa halis weyn."
Wuxuu sarkaalkan ku gooddiyay in booliska ay tijaabadan ku sameyn doonaan "fursad walba oo ay helaan."
Sannadkii 2013-ki ayaa la dhaqan galiyay sharciga shati kala noqoshada ee Cassie's Law oo loogu magac daray wiil 16 jir ahaa oo lagu magacaabi jiray Cassie McCord kaasoo dhintay ka dib markii nin 87 sano jir ah oo gaari waday uu lumiyay xakameynta isagoo maraya magaalada Colchester, Essex.
Magaalo lagaa takooraya haddaad bunka cabbin